Caawinta Iskuulka: Ku dar Adeegga Macaamiil Miisaanka Leh ee Bartaada | Martech Zone
Caawinta Iskuulka: Ku dar Adeegga Macaamiil Miisaaman bartaada
Sabti, Agoosto 31, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Gaar ah: Isticmaal xiriiriyeheena xiriirka si aad u hesho 30% LAGA TAGAY 3 bilood diiwaangelinta Qorshaha Heerarka HelpScout.
In kasta oo hoggaamiyeyaashu saadaalinayaan in shirkad waliba ay hadda tahay shirkad warbaahineed, haddana waxaan ku doodi lahaa in shirkad waliba ay u baahan tahay adeeg macmiil oo weyn iyo jawaab. Haddii ay jirto hal arrin oo carqaladeyn karta dadaalladaada suuqgeynta warbaahinta bulshada, kama jawaabeeyso wax ku ool ah codsiyada adeegga macaamiisha.
Caawi Scout waxay bixisaa barxad loogu talagalay taageerada macaamilka ee la qiyaasi karo iyada oo aan lahayn kakanaanta iyo maaraynta miis caawimaad buuxda. Caawinta Scout uma muuqan karto macaamiisha iyo miisaanka sida miisaska kale ee caawimaadda, laakiin waayo-aragnimada macmiilku waa shaqsi ahaan sidii email caadi ah. Barxadku wuxuu leeyahay astaamo iskaashi oo kobciya wax soo saarka kooxda isla markaana kuu oggolaanaya inaad kooxdaada ku hayso isla bogga adoo ka farxinaya macaamiisha. Warbixinnada sidoo kale waa lagu soo daray, adoo gelinaya cabirro waxqabad oo wax-qabad ah oo ku jira farahaaga si aad ula socon karto waxqabadka waqtiga.
Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu xoogan ee Caawinta Scout uu yahay awooda lagu sameeyo socodsiinta shaqooyinka adag ee jawaabaha otomaatiga, marinka iyo meeleynta, iyo waxqabadyo dheeri ah.
Intaa waxaa sii dheer, Caawimaadda 'Scout' waxay bixisaa xoogaa isku-dar ah oo isku dhafan sida Filter Jawaab otomaatig ah iyo sidoo kale is-dhexgal dhinac saddexaad ah oo leh Dabka, kaabsol, Google Apps, Sare, HipChat, Xun, KISSmetrics, Klaviyo, Si fudud, Sidoo kale, Snap Howl, Codka farriinta, Zapier iyo 180 + adeegyada kale ee shabakada. Waxaad sidoo kale ku dhisi kartaa arjigaaga gaarka ah barnaamijkooda API iyo shabakadaha.
Tags: Dabkakaabsolbarnaamijyada googlemiiska caawintaCaawi ScoutSareHipchatXundhunkashoKlaviyoSi fududSidoo kaleSnap HowlcodkaShabakadahazapier
Tilmaamaha Ganacsiga Yaryar ee Aqoonta Warbaahinta Bulshada
Khatartu Feejignaan ma ahan ee waa Macnaha guud
Sep 2, 2013 at 9: 30 AM
Runtii waan ku qanacsanahay inaad qorto maqaalkan ku saabsan Caawinta Scout, Doug! Hayso maalin cabsi leh.
Dib u eegista kaararka deynta ayaa dib u eegis ku sameeya
Nov 30, 2013 at 1: 01 AM
Suuqgeynta khadka tooska ah ayaa hadda la isticmaalaa. Dadka badankood waxay wax ka iibsadaan khadka tooska ah
maxaa yeelay dadku waqti uma haystaan ​​inay dukaan u dukaameystaan ​​oo ay wax doortaan.
Suuqgeynta internetka waxay leedahay baaxad weyn mustaqbalka.